Mayelana NATHI - Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd.
I-Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd, iyinhlangano yefektri esebenza ngocingo olushiselwe kanye nefektri yemikhiqizo yasesiteji kusukela ngo-1997. Ifektri ivunywa yi-ISO 9001-2008. Iminyaka eyi-10 ikhipha okuhlangenwe nakho ngezinsizakalo ezinhle zokuthengisa.Sinabasebenzi abangaba ngu-230 enkampanini, umugqa wensimbi yokwakha umshini womshini, umugqa wokuzenzakalela wocingo othomathikhi, umshini wokusika, umshini wokugoba, umshini we-perforating, umshini wokushaya, umshini wokugoqa nokwenza i-robot welding.
"Umkhiqizo wekhwalithi, ngesikhathi sokulethwa kanye nezinsizakalo ezinelisekile emva kokuthengisa" yifilosofi yethu yebhizinisi.
"Dala inani enjabulweni" yisiko lenkampani yethu.
“Ukunciphisa ubuphofu nokwenza impilo yawo wonke umuntu ibe ngcono” ngumsebenzi wethu.
● 1997 Isungulwe (Weijia Metal Mesh Factory).
● 2008 Thola iziqu zokungenisa nokuthekelisa (i-Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd).
● 2012 Thola isitifiketi se-ISO 9001.
● Imishini yokukhiqiza ethuthukisiwe ka-2015 isetshenzisiwe.
● U-2017 Uqale ukunaka isisa, ukunikela ngezithombo zezihlahla zezithelo, izinhlobo zezingulube, njll ezindaweni zobumpofu.
● 2019 Qedela ukuguqulwa kwesistimu yamasheya.
● 2020 Isitifiketi sebhizinisi esiphakeme esigcwalisiwe.
* Umkhiqizo onamanani wefektri onikeziwe.
* Ikhwalithi enhle enesitifiketi se-ISO 9001 kusukela ngonyaka ka-1997.
* Ithimba lokuthengisa lochwepheshe futhi liphendula ngokushesha kumakhasimende kungakapheli amahora angu-12.
* Imikhiqizo ingenziwa ngezifiso.
* Ilogo yekhasimende kumikhiqizo iyamukeleka.
Kusukela ngo-1997, Siqala ibhizinisi lokukhiqiza ihele lensimbi, i-frp grating kanye nocingo lwensimbi olushiselwe ukwakha nokwakha amaphrojekthi. Gxila kwimikhiqizo esezingeni eliphezulu nasekulethweni kwesikhathi, sithole ama-honours amaningi, njenge- "Integrity Enterprise", "Factory enhle kakhulu", futhi siyi-Vice President we "Anping County Wire Mesh Chamber of Commerce".
Inkampani yethu ikholelwa ukuthi abasebenzi bangumcebo oyigugu wenkampani, futhi ikunaka kakhulu ubunye babasebenzi, ukuthuthukiswa kwempilo yabo yengqondo, kanye nokwenza ngcono amakhono amakhono. Futhi uhlele ukwakhiwa kwamathimba amaningi ezinkampani, umhlangano wokushintshanisa wokuzilibazisa womuntu siqu, futhi unakekele amalungu omndeni wabasebenzi